Ukukhuthaza ukulingana kwabasetyhini
MANJE Amaxesha: asekelwe ngo-1966
Injongo yeNational Organisation for Women:
"ukuthatha inyathelo" ukufezekisa ukulingana kwabasetyhini
Iziganeko eziqhubela phambili ekudalweni kwa MANJE
1961-1963: IKhomishoni kaMongameli kwiNkcazo yabasetyhini
1963: Ukupapashwa kwe -Feminine Mystique nguBetty Friedan
Umthetho wamaLungelo oLuntu ka-1964: ukucalulwa ngokwesini, kodwa abaninzi abafazi babecinga ukuba akukho nto inyanzeliswayo
Ngowe-1966, ngoJuni: iWashington, DC, intlanganiso yeekomishoni zombuso kwiimeko zabasetyhini. UBetty Friedan nabanye ababengenayo babengenelisekanga ngokungabikho kwezicwangciso zesenzo ezivela kule ntla nganiso, kwaye i-28 idibene kwigumbi lehotele le-Friedan, elikhokelela ekudalweni kweNational Organization for Women (MANJE).
Kwiintlanganiso ezininzi ezingasesikweni ezilandelwa ngqungquthela yelizwe, inani lezentlalontle lihlanganisene ukuze lenze iNhlangano kaZwelonke yabaseTyhini (MANJE) ngo-1966, ekuboneni imfuno yoluhlu lwamalungelo oluntu ngokubhekiselele kumalungelo amabhinqa. UBetty Friedan ukhethwe ngumongameli wokuqala we-MAN kwaye wakhonza kule ofisi iminyaka emithathu.
MANJE Ingxelo yeNjongo 1966: Amaphuzu aphambili
Amalungelo amabhinqa njengokuba "ukusebenzisana ngokulinganayo namadoda," "ukusebenzisana ngokulinganayo kwezesondo"
jolise kwi-activism: "ukuhlangabezana, ngesenzo esiqinileyo, iimeko ezikhusela abafazi ukuba banandipha ukulingana kwamathuba kunye nenkululeko yokuzikhethela ilungelo labo njengabantu baseMelika, njengabantu"
Amalungelo amabhinqa abonwayo kumxholo we-revolution yehlabathi jikelele yamalungelo abantu "; ukulingana kwabasetyhini njengethuba "lokuphuhlisa abantu abanokubakho"
Injongo yokubeka abafazi "kwiindawo eziphambili zezopolitiko zaseMzantsi Afrika, ezoqoqosho nezentlalo"
Ukuzibophezela kwamanje "ukulingana, inkululeko kunye nesidima kwabasetyhini" bachazwe ngokucacileyo ngokungabi "ngelungelo elikhethekileyo" kwabasetyhini okanye "ubutha kubantu"
Imiba eqhoshayo yabemi kwiNgxelo yeNjongo
yengqesho - ingqalelo enkulu kwingxelo yimiba ephathelene nomsebenzi kunye noqoqosho
usapho kuquka imimiselo yomtshato kunye nomtshato, uxanduva lwasemakhaya ngenxaxheba yesini
ukuthatha inxaxheba kwezopolitiko: kumacandelo, ukuthatha izigqibo, abaviwa (MANJE kwakufuneka zizimelele kunoma iyiphi ipolitiki ethile)
imifanekiso yabasetyhini kwimidiya, kwiinkcubeko, kwimithetho, kwizenzo zentlalo
Ukuthethwa ngokukhawuleza ngolu hlobo lwe-"calulo oluphindwe kabini" lwabasetyhini base-Afrika baseMerika, amalungelo anxulumene namabhinqa kwimicimbi ebanzi yobulungisa boluntu kuquka ubulungisa bobuhlanga
inkcaso "ekukhuseleni" emsebenzini, esikolweni, kwicawa, njl.
OKUSETYENZISWA izixhobo zesikhombisa zokusebenza kule miba: Iinqununu ezisixhenxe zeeNkcazo zeNqununu
U-Iz Casiano, 1926-
UMary Eastwood, ngo-1930-
UCaroline Davis , 1911-
UBetty Friedan , 1921-2006
U-Sonia Pressman Fuentes, ngo-1928-
URichard Graham , 1920-2007
U-Anna Arnold Hedgeman , 1899-1990
UAileen Hernandez , 1926-
UPauli Murray, 1910-1985
UMarguerite Rawalt, 1895-1989
Udade Mary Joel Funda
UAlice Rossi, 1922-
Okunye malunga nala mabhinqa namadoda: Amagosa okuqala oku-MANJE
Okubalulekileyo MANJE Ukusebenza
Eminye imiba ephambili apho i-MANJE isebenze khona:
Kwintlanganiso yokuqala yangoku emva kwenkomfa eyasungula, ngo-1967, amalungu akhetha ukugxila kwiiLungelo loLungelo loLingana , ukuchithwa kwemithetho yokukhipha isisu kunye nenkxaso kawonkewonke yokunakekelwa kwabantwana.
Ukulungiswa kwamalungelo okulingana (i-ERA) yahlala ingqwalaselo ephambili kwaze kwagqitywa ixesha lokugqibela lokugqitywa ngo-1982. Ukuhamba, ukuqala ngo-1977, kwazama ukuhlanganisa inkxaso; MANJE ibuye iququzelele iinkwenkwe ngamabutho kunye nabantu ngabanye kwiziganeko kwiindawo ezingavumelekanga i-ERA; OKUSENYENZISWA KULUNGILE iminyaka engama-7 ngowe-1979 kodwa iNdlu kunye neNkundla yeeNkundla yavuma kuphela isiqingatha salo xesha.
NAMANYE ijolise ekuthotyelweni komthetho kwemigqaliselo yoMthetho wamaLungelo oLuntu osetyenziswe kwabasetyhini, yanceda ukukhulelwa nokupasa umthetho ngokubhekiselele kuMthetho wokuThatshazwa koMzimba (1978), wasebenza ukupheliswa kwemithetho yokukhipha isisu kwaye, emva koRoe v. Wade , ngokuchasene nemithetho eya ukukhawulela ukufumaneka kwesisu okanye inxaxheba yowesifazane okhulelweyo ekukhetheni isisu.
Kwiminyaka ye-1980, i-MAN ngokuqinisekisiweyo ngumongameli kaMongameli uWalter Mondale otyunjelwe umfazi wokuqala we-VP yeqela elikhulu, uGeraldine Ferraro .
MANJE wengeze usebenzo olumelana nemigaqo kaMongameli uRonald Reagan, kwaye waqala ukusebenza ngokubanzi kwimibandela yamalungelo obulili. NJE kwakhona ifakwe isahluko somthetho malunga namaqela ahlasela iiklinikhi zokukhipha isisu kunye neenkokheli zawo, ezibangelwa isigqibo seNkundla ePhakamileyo se-1994 ngoku .
Ngama-1990, i-MAN ihlale isebenzayo kwimibandela equka amalungelo oqoqosho kunye nokuzala, kwaye yabonakala ngokubonakalayo kwimicimbi yobundlobongela basekhaya. NJE ibuye idale i-Women's Color and Allies Summit, kwaye ithathe injongo kwi-"amalungelo kabawo" ukunyakaza njengenxalenye yentshukumo ye-MAN ngokuphathelele kwimithetho yentsapho.
Emva ko-2000, MANJE usebenze ukuchasana nezicwangciso zolawulo lweBush kwimibandela yabamalungelo oqoqosho abasetyhini, amalungelo okuzala, kunye nokulingana komtshato. Ngo-2006, iNkundla Ephakamileyo isusile i- MANJE v. Isikhuselo seSikidler esasikhupha izikhumbuli zekliniki zokubhikisha ekuphazamiseni ukufikelela kwesigulane kwiiklinikhi. NJE ibuye ithathe imiba yooMama kunye nabanakekeli bamaLungelo oQoqosho kunye nomnxibelelwano phakathi kwemiba yokukhubazeka kunye namalungelo amabhinqa, naphakathi kwamalungelo omama kunye namalungelo amabhinqa.
Ngomnyaka we-2008, iKomidi leNkqubo yezoPolitiko (MAN) ye-Political Action Committee (PAC) yamkele uBarack Obama kumongameli. I-PAC yamkele uHillary Clinton ngoMatshi, ngo-2007, ngexesha leprayimari. Umbutho awuzange wamukele umviwa ukhetho oluqhelekileyo ukususela ngo-1984 ukhetho lukaWalter Mondale kuMongameli noGeraldine Ferraro kwiNtloko kaMongameli. NAMANYE uvunyiwe nguMongameli Obama kwikota yesibini ngo-2012. NOWU qhubeka ubeka uxinzelelo kuMongameli Obama kwimicimbi yabasetyhini, kubandakanywa nokuqeshwa kwabasetyhini kunye nabasetyhini bemibala.
Ngo-2009, MANJE ubengummeli oyintloko weLilly Ledbetter Fair Pay Act, esayinwe nguMongameli Obama njengesenzo sakhe sokuqala esisemthethweni. MANJE ubuye usebenza emzabalazweni wokugcina ukukhulelwa kwe-contraception kwi-Care Affordable Act (ACA). Imiba yokhuseleko lwezoqoqosho, ilungelo lokutshata ngenxa yobundlobongqingili obufanayo, amalungelo okufudukela kwamanye amazwe, ubundlobongela kwabasetyhini kunye nemithetho yokunciphisa izisu kunye nokufuna i-ultrasounds okanye imimiselo yeeklinikhi zempilo engavamile. MANJE kwakhona waba ngumsebenzi kumsebenzi omtsha ukugqithisa ukulungiswa kwamalungelo okulingana (i-ERA).
Ulwahlulo lwabantu besifazane
Ukunyanzeliswa kunye neMbali Yabasetyhini
Umqashi waseTshayina Ufumanisa ukuSilk-Making
Ngaba uAlexander Omkhulu wayengumGrike?
Umnqamlezo oMthandayo Uthando: Ixesha elide Uthando lweeCom
Indlela yokufaka ii-Corvette kunye ne-Side Exhaust
IYunivesithi yaseTennessee kuMartin Admissions
Oko Kuthetha Ukuba iNyanga Yakho iCorpio
IMfazwe Yehlabathi I kuLwandle
UkuPhakanyiswa kweZikolo eziPhakamileyo IziPhulo zokuPhakamisa i-Majors Majors
Iincwadi eziphambili ze-Chakra Healing Books
Imbali Yokuqala Yendiza
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi uEtudier ('ukuFunda)